Dr.Web – software ah in iskaan, ogaan iyo ka saari fayrusyada ka. software The ilaaliya computer ka mail iyo dirxi network, fayrusyada file, Trojans, spyware, adware, iwm Dr.Web kuu ogolaanayaa inaad inuu ku soo laabto faylasha cudurka gobolka asalka ah ama in u dhig karantiil ah. software The hubinayaa in joogitaanka fayrusyada on qalabka iyo inta badan oo ka mid ah qaababka hadda jira ee files Tifaftirayaasha ama archives. Dr.Web si joogto ah cusbooneysiisaa database virus ku siinaya difaac aad u wax ku ool ah ee nidaamka ka.
Protection ka dhanka ah fayraska, spyware iyo adware
Ogaanshaha ah fayrusyada baakadeeyey
Joojinta of sites khatar ah
updates joogto ah database fayraska
qalab The functional in la ogaado oo ka saar fayraska. software The hortagaa hanjabaado kala duwan oo kuu ogolaanaya in aad xaddido helitaanka ah u websites dadka waaweyn.
qalab An ku ool ah in la ogaado oo ka saar waxyaabaha xaasidnimo ah iyadoo la isticmaalayo falanqaynta dabeecadda iyo technology daruurtii.
Bitdefender 22.0.12.161 Internet Security, Antivirus Plus iyo Total Security; 1.0.9.31...
software The ogaadaa dayacanka nidaamka iyo iyaga tiraa. Barnaamijka wuxuu bixiyaa search ammaan ah oo ku saabsan internetka iyo ilaalinta ah ka dhanka ah musuqmaasuqa.
Codsiyada wax ku ool ah habka download iyo update ee aaladaha Apple. Software ayaa u saamaxaaya in ay soo bixi kala duwan oo ka mid ah codsiyada waxtar leh ujeeddooyin kala duwan.
Software si ay u ururiyaan macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan kaarka video, processor, naqshadeynta card iyo waxyaalo kale. Software ayaa u saamaxaaya in ay arkaan iyo culayska ay ku processor ka naqshadeynta tijaabiso.
qalab The dhamaystiran si kor loogu qaado waxqabadka nidaamka. software waa ay awoodaan in ay soo saarto qashinka nidaamka, siiyaan ilaalinta iyo xannibi Xayaysiiska.